Kenya: Sharciyaqaan ka mid ahaa argagixisada - BBC Somali
Kenya: Sharciyaqaan ka mid ahaa argagixisada
5 Abriil 2015
Image caption Ehalada dadkii ku dhintay weerarka.
Afhayeenka Wasaarada Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay, in Cabdiraxim Cabdullahi, oo sharciga ka bartay jaamacada Nairobi inuu kamid ahaa afartii nin ee weeraray jaamacada Garisa Khamiistii oo ay ku dhinteen 148 qof.
Hadda ayaa la magacaabay inuu ahaa wiil uu dhalay nin madax ka ah xafiiska dowladda degmo ka mid ah gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaa horay loo sheegay in la waayay, waxaana laga cabsi qabay inuu galay Soomaaliya.
Wasaarada Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in dhamaan nimankii weerarka qaaday la dilay Khamiistii. Shan kale oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin weerarka ayaa ilaa hadda la xiray, kaasoo ah weerarkii argagixiso ee ugu waynaa ee lagu qaado Kenya.